Dilka Askarigii ugu horeeyey ee la dilom isaga oo isbaaro qaadayey oo Muqdisho ka dhacay iyo meelaha qaarkood ...... | Somalisan.com Home
Dilka Askarigii ugu horeeyey ee la dilom isaga oo isbaaro qaadayey oo Muqdisho ka dhacay iyo meelaha qaarkood ......
12/2/2012 3:25:00 P
Sidoo kale wararka maanta ka soo baxaya dadka ku dhaqan Dharkeenley iyo gaadiidleyda ayaa sheegaya in maanta meelaha qaar dib loogu soo celiyay lacagtii baada ahayd ee gaadiidleyda laga qaadi jirey
Waxaa maanta degmada dharkeenley lagu dilay Askarigii ugu horeeyay ee maanta gudaha Muqdisho isku daya inuu qaato lacago baad ah.
Sida wararka aan ku helnay askariga la dilay ayaa gaadiidka dadweynaha waxaa uu ka urursanayay lacago baad ah taasoo keentay inay askar kale toogteen markii ay ku soo baxeen. Wararka ayaa tilmaamaya in dhacdadaani ka dhacday maanta suuq boocle oo ka tirsan degmada dharkeenley waxaana ay ku soo aadeysaa xili dhawaan la qaaday inta badan wixii jidgooyo yiilay oo hore baabuurta lacago baad ah looga qaadan jirey. Sidoo kale wararka maanta ka soo baxaya dadka ku dhaqan Dharkeenley iyo gaadiidleyda ayaa sheegaya in maanta meelaha qaar dib loogu soo celiyay lacagtii baada ahayd ee gaadiidleyda laga qaadi jirey. Dhanka kale saraakiisha ciidamada iyo maamulka dharkeenley ayaan ka hadlin dhacdooyinka maanta ka soo cusboonaday gudaha degmada dharkeenley.